कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्न ‘गुर्जो’को रस फाइदाजनक : योगगुरु रामदेव – Sandesh Munch
Prevतपाईंलाई कोरोना सर्ने जोखिम कति छ ? यसरी थाहा पाउनुस् । यसको प्रयोग कसरी गर्ने?
Nextछोराको मृत्युको खबर सुनेपछि शस्त्र त्याग गरी रणभुमिमा शोकमा डुबेको अवस्थामा द्रौपदीका भाई धृष्टद्युम्नले निर्दोष द्रोणाचार्यको टाउको काटिदिएका थिए ।
अब खुल्दैछ भाग्यको ढोका यि ४ राशि हुनेहरूको,
रिया चक्रवर्तीको भयो पर्दाफास आखिर यहि नै रहेछ मुख्य
पुरुषलाई मोहीत पार्ने चार रा शी भएका युवतीहरु-: जानी राखौ